Thu, Apr 25, 2019 | 11:55:55 NST
आईपीएलमा सन्दीपको प्रभावशाली डेब्यू, यसरी लिए पहिलो विकेट (भिडियो)
वैशाख ३० – इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा डेब्यू गरेका नेपाली युवा बलर सन्दीप लामिछानेले पार्थीव पटेललाई आउट गरे ।
सन्दीपको डेब्यू खेलमा दिल्लीले जित्न सकेन
नेपाली युवा बलर सन्दीप लामिछानेले शनिबार आईपीएलीमा डेब्यु गरे । प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना सकिएको दिल्लीले दुई जना युवा खेलाडीलाई पहिलो पटक आईपीएल टिममा समावेश गर्दा दुवैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
आइपीएल : डेब्यूमै सन्दीपको लोभलाग्दो बलिङ
सन्दिप लामिछानेले अाईपिएल डेब्यु बलिङमा प्रभाबशाले बलिङ गरेका छन ।
सन्दिपको ३ ओभर : १५ रन दिएर १ विकेट
तीन ओभरको बलिङ सकिदा सन्दिपले १५ रन दिएर एक विकेट लिएका छन ।
आईपिएलमा सन्दिपको पहिलो विकेट
आइपिएलमा डेब्यु गरेका सन्दिप लामिछानेले आफ्नो पहिलो विकेट लिएका छन ।
आईपीएलमा सन्दीपको डेब्यू
वैशाख २९ – सन्दीप लामिछानेले आईपीएल क्रिकेटमा डेब्यू गरेका छन् ।
​आईपीएलमा कोलकाताले बनायो सिजनकै सर्वाधिक रन, पञ्जाव पराजित
वैशाख २९ – आर्इपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइटराइडर्सले किङ्स इलाभेन पञ्जावलाई ३१ रनले हराउँदै महत्वपुर्ण २ अंक थपेको छ ।
आईपीएलमा सन्दीपको डेब्यू तर उनकाे बलिङ हेर्न अझै केही घण्टा पर्खिनुपर्ने
सन्दीपले अाज अार्इपीएलमा डेब्यू गर्ने
वैशाख २९ – सन्दीप लामिछाने आईपीएल क्रिकेटमा अनुबन्ध भएको खबर अब पुरानो भइसक्यो तर उनले खेल्न चाही कहिले पाउलान् भन्ने कौतुलता भने कायमै छ ।
डिफेण्डिङ च्याम्पियन चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको धरमरमा, के हुनुपर्छ चेल्सी छानिन ?
वैशाख २९ – इंङलिस प्रिमियर लिगको यो सिजनको उपाधिको छिनोफानो भइसकेको छ ।
प्रदेश सभामुख अधिकारीलाई महराद्वारा स्वास्थ्यलाभको कामना
काठमाडौं, वैशाख २९ – संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रदेश नम्बर ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुभएको छ ।
​नेपाल विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं, वैशाख २९ – नेपाल रुसमा चलिरहेको सडक बालबालिकाको विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
विश्वकप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी
काठमाडौं, वैशाख २९ – रुसको मस्कोमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सडक बालबालिकाको विश्वकप फुटबल अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ ।
धोनीको पछि लागिन् ढिंचेक पूजा, र्‍याप गाउँदै भनिन् : सीएसके विल विन
वैशाख २९ – इन्टरनेट ‘सेन्सेशन गर्ल’ का नामले परिचित ढिंचेक पूजा एकपल्ट फेरि चर्चामा आएकी छिन् ।
बटलर चम्किएपछि धोनीको चेन्नई राजस्थानसँग पराजित
वैशाख २९ – इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत शुक्रबार रातिको खेलमा राजस्थान रोयल्स विजयी भएको छ ।
मनाङलाई हराउँदै पुलिसले चुम्यो दमक गोल्डकपको उपाधि
झापा, वैशाख २८ –झापाको दमकमा सञ्चालित दमक गोल्डकप फुटबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ ।
मोरिन्हो भन्छन्, दोस्रो हुँदा के उत्सव मनाउनु ?
वैशाख २८ – म्यान्चेष्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होले प्रिमियर लिगमा टिम उपविजेता बने पनि खुशी साटासाट नगर्ने बताएका छन् ।
नाडालले तोडे ३४ वर्ष पुरानो किर्तिमान
वैशाख २८ – क्ले कोर्टमा लगातार ५० सेटको जित निकाल्दै राफेल नाडालले जोन म्याक्नोरीको ३४ वर्ष पुरानो किर्तिमान ताेडेका छन् ।
बराबरीमै रोकियो म्यानचेष्टर युनाईटेड
वैशाख २८ – इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाईटेडले वेष्टह्यामसँग बराबरी खेलेको छ ।
जेठ १३ देखि एकदिवसीय क्रिकेटको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं, वैशाख २७ – एकदिवसीय क्रिकेटको एकमात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिता जेठको दोस्रो हप्तादेखि हुने भएको छ ।
बार्सिलोना सिंगो सिजन अपराजित ??
वैशाख २७ – बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगाको सिंगो सिजन नै अपराजित रहने क्लबको कीर्तिमानोन्मुख भएको छ ।
​रामोसको आत्मघाती गोलले रियल मड्रिड फेरि हार्‍याे
वैशाख २७ – स्पेनिस फुटबल लिग लालिगामा रियल मड्रिडले बुधबार सेभियासँगको खेलमा ३–२ को हार व्यहोरेको छ । सर्जियो रामोसले पेनाल्टीमा गोल गर्नबाट चुक्नु र आत्मघाती गोलले नै रियल मड्रिड सेभियासँग हार्न पुग्यो ।
कोप्पा इटालियाको उपाधि युभेन्टसले जित्यो
वैशाख २७ – कोप्पा इटालियाको उपाधि युभेन्टस्ले जितेको छ । एसी मिलानलाई हराउँदै युभेन्टसले लगातार चौथो कोप्पा इटालियन कपको उपाधि जितेको हो ।
​म्यान्चेस्टर सिटी सय अंकसहित कीर्तिमान बनाउने दाउमा
वैशाख २६ – इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितिसकेको म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटन एण्ड होभलाई ३–१ ले हराएको छ ।
मुम्बई इन्डियन्सका सामु कोलकाता नाइटराइडर्स निरीह, १०२ रनले पराजित
वैशाख २७ – इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल) अन्तरगत बुधबारको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले कोलकाता नाइटराइडर्सलाई १०२ रन ले हराएको छ । कोलकातामा भएको यस खेलमा केकेआरका कप्तान दिनेश कार्तिकले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेका थिए । पहिले ब्यािटङको निम्तो पाएको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २१० रनको स्कोर खडा गरेको थियो । मुम्बईका लागि इशान किशनल् उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक बनाए । उनले मात्रै २१ बलमा ५ चौका र ६ छक्काको सहयोगले ६२ रन बनाएका हुन् । त्यस्तै मुम्बई...
कुम्मायक–कुसायक गोल्डकपको उपाधि चर्च ब्वाइजलाई
पाँचथर, वैशाख २६ – पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोकमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण दोस्रो कुम्मायक–कुसायक गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको उपाधि चर्च ब्वाइज क्लब काठमाडौंले जितेको छ ।
‘हामीलाई खाते भन्नेहरुलाई विश्वकप फुटबलको ट्रफी जितेर देखाइदिन्छौँ’
काठमाडौं, वैशाख २६ – सानैमा आमा बितेपछि जुम्लाका विकास तिमिल्सिना एक्लो भए । सात वर्षकै उमेरमा आमा गुमाएपछि उनी कहिले आफन्तकोमा अनि कहिले सडकमा भौँतारिन थालेका थिए ।
राजस्थान रोयल्ससँगको हारको रिस सहवागसँग पोखिन् प्रीतिले
वैशाख २६ – इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल) मा मंगलबार बेलुका किंग्स इलावेन पञ्जाबलाई राजस्थान रोयल्सले १५ रनले हरायो ।
मिलोस राओनिक ओपन टेनिसको तेस्रो चरणमा
वैशाख २६ – मिलोस राओनिक स्पेनमा जारी मड्रिड ओपन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
वैशाख २६ – पीएसजीले फ्रेन्च कपको उपाधि जितेको छ । फाइनलमा तेस्रो डिभिजनको लेसलाई दुई शून्यले हराउँदै पिएसजीले उपाधि हात पार्यो ।
आईपीएल : पञ्जावमाथि राजस्थानको जित
वैशाख २६ – इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा राजस्थानले पञ्जावलाई १५ रनले हराएको छ ।
​यूसफ पठानले यस्तो क्याच गरे कि भाइ इरफानले सोधे : यो क्याच हो कि आँप टिपेको ?
वैशाख २५ – इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट(आईपीएल) २०१८ मा केन विलियम्सनको कप्तानीमा सनराइजर्स हैदराबादले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
रोनाल्डो भएपछि पोर्चुगलका लागि यो विश्वकपमा सबै सम्भव : मोउरिन्हो
वैशाख २५ – म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक होजे मोउरिन्होले क्रिस्टियानो रोनाल्डो टिममा भएकोले २०१८ को विश्वकपमा पोर्चुगललाई कुनै पनि कुरा असम्भव नहुने बताएका छन् ।
एपीएफले उचाल्यो चौथो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि
काठमाडौं, वैशाख २५ – चौथो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि एपीएफ क्लबले जितेको छ ।
विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाई
काठमाडौं, वैशाख २५ – रुसको मस्कोमा हुने ‘स्ट्रिट चाइल्ड वल्र्डकप’ मा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बिदाई गरेको छ ।
दमक गोल्डकपमा सेमिफाइनलका खेल आजदेखि
झापा, वैशाख २५ – दमक गोल्डकप फूटबल प्रतियोगितामा आजदेखि सेमिफाइनलका खेल हुँदैछन् ।
ब्याटिङ नचल्दा फेरि बेंग्लोर पराजित, एलिमिनेसनको खतरा
वैशाख २५ – आईपीएल क्रिकेटमा सनराईजर्स हैदराबादसँग पराजित भएपछि रोयल च्यालेञ्जर्स बेंग्लोरमाथि एलिमिनेसनको दवाब बढेको छ ।
​एन्फाको महासचिवमा तुलाधर, पूर्व एआईजी शर्माको नेतृत्वमा लिग कमिटी गठन
काठमाडौं, वैशाख २४ – अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ कार्यसमितिको बैठकले ए डिभिजन लिगका लागि कमिटी गठन गरेको छ ।
आईपीएलमा राहुलले जिताए पञ्जावलाई
वैशाख २४ – इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा पञ्जावले राजस्थानलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । जितसँगै पञ्जाव लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।